၀င်ငွေနည်းလို့ တစ်လ တစ်လ အသုံးစရိတ်တောင် လိပ်ပတ်မလည်တာ... ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုစုရပါ့မလဲ?
အဲလို ခဏ ခဏ ပြောဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိလား။ ဒါဆို ဒီပို့စ်ကို မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါ။
လူတိုင်းနီးပါးကတော့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေထိုင်နိုင်ဖို့၊ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ငွေစုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အနေနဲ့ အခြေခံလစာလောက်ပဲ ၀င်ငွေရှိတဲ့အခါ တစ်လ တစ်လ လောက်ငှအောင် မနည်းသုံးနေကြရတာမို့ ငွေစုဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။
ပိုက်ပိုက်က သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံး၀င်မယ့် အချက်လေးတွေ မျှဝေပေးပါမယ်။
(၁) အတိုးနှုန်းမြင့်တဲ့ အကြွေးတွေကို အရင် ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ငွေစစုဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အကြွေးတွေကို ကျေအောင် ဆပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အကြွေးတွေက အတိုးနှုန်းမြင့်နေရင် ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေက အတိုး ဆပ်နေရတာနဲ့ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ အတိုးနှုန်းမြင့်တဲ့ အကြွေးတွေကို အရင် ဆပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပါမယ်။
(၂) နေစရိတ်ကို လျှော့ချပါ။
ကျွန်မတို့တွေအတွက် နေထိုင်စရိတ်က အကြီးမားဆုံး ကုန်ကျစရိတ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ၀င်ငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအများစုကို နေထိုင်စရိတ် (အခန်းခ၊ အဆောင်ခ) အတွက် သုံးကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်က ၀င်ငွေနည်းတဲ့သူဆိုရင် တိုက်ခန်းငှားနေမယ့်အစား ဈေးသက်သာမယ့် အဆောင်နေတာမျိုး၊ တိုက်ခန်းမှာ အခြားသူကိုပါ အငှားတင်တာမျိုး စသည်ဖြင့် ကိုယ့်အတွက် စရိတ် သက်သာမယ့်နေရာကို ရှာဖွေနေထိုင်ခြင်းဖြင့် နေထိုင်စရိတ်ကို လျှော့ချပြီး ငွေစုဖို့ ကြိုးစားပါ။
(၃) ကိုယ့်ရဲ့ အသုံးစရိတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းချုပ်ပါ။
ငွေများများ ပိုစုမိဖို့ဆိုရင် ကိုယ် သုံးနေတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို မကြာခဏ ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ - အပြင်မှာ တခုခု ၀ယ်စားမယ့် အစား အိမ်မှာ ချက်စားလိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒါက ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်ပြီး အကုန်အကျလည်း ပိုသက်သာစေပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ လက်ရှိအလုပ်က ၀င်ငွေကလည်း နည်းတယ်၊ စုဖို့ ငွေမကျန်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အပို၀င်ငွေရလာအောင် အလုပ်ပိုတစ်ခု လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်ပြည့် အလုပ်တစ်ခုအပြင် အားလပ်ရက်တွေမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးတွေ လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေ လမ်းကြောင်း တိုးပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ . . . ခု ပိုက်ပိုက်ကနေ မျှဝေပေးတဲ့ အချက်ကလေးတွေက သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့လဲ ဒီ အချက်တွေထဲက ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာ ပိုက်ပိုက်လည်းသိရအောင် ကွန်မန့်မှာ နံပါတ်လေးတွေ ရေးပေးသွားဦးနော်။
ကာကီဘို သို့မဟုတ် မိသားစု ငွေစာရင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်လေး 📗